Ireo emulator Nintendo 64 tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Eder Ferreño | | Fampiharana Android, Emulators, Tutorials
Ny Nintendo 64 dia iray amin'ireo console malaza eran-tany, ary efa fantatra fa manao banga amin'ireo malaza sy mahomby indrindra amin'ny tantara. Izy io dia fampiononana manan-danja lehibe amin'ny sehatra sy amin'ny fampandrosoana ny tontolon'ny lalao video. Rehefa nandeha ny fotoana, nipoitra ho an'ny Android ny emulateur. Misaotra azy ireo dia toy ny hoe milalao konsoly indray ianao.
Noho izany, etsy ambany izahay dia mamela anao hisafidy ireo emulator Nintendo 64 tsara indrindra hitanay anio. A) Eny, afaka miaina ny traikefa amin'ny lalao amin'ny console malaza ianao, mivantana amin'ny telefaona Android anao.
Ny fisafidianana an'ity karazana emulator ity dia nitombo rehefa nandeha ny fotoana. Efa hitantsika fa misy a DS emulator ho an'ny Android fa ankehitriny manana an'io ihany koa izahay ho an'ny N64. Tsy izy rehetra no manana ambaratonga mitovy, fa misy safidy vitsivitsy foana izay misongadina ambonin'ny ambiny. Hiresaka aminao momba ireo safidy etsy ambany ireo izahay.
Manomboka ity lisitra ity amin'ny mety ho emulator malaza indrindra izay hitantsika amin'izao fotoana izao ao amin'ny Play Store. Ity emulator ity dia mifototra amin'ny loharano misokatra Mupen64 ho emulator. Na dia novaina aza ny lafiny sasany raha ampitahaina amin'ny tany am-boalohany, dia amin'ny lafiny sasany dia misy ny fanatsarana, izay mamela ny traikefan'ny mpampiasa kokoa. Amin'ny ankapobeny dia miavaka amin'ny fanolorana traikefa filokana tsara ho an'ny mpampiasa izy. Fanampin'izay, ny olana momba ny mifanentana izay niainanao taloha dia nihatsara be rehefa mandeha ny fotoana.
Maimaimpoana tanteraka ny fampidinana an'ity emulator ity ho an'ny Android. Na izany aza, manana dokambarotra ao anatiny izahay. Tsy ela ny fanavaozana azy, ary toa nilaozan'ny mpamorona izany. Saingy mbola safidy tsara ihany io ka tsy mila mandoa na inona na inona isika.
Faharoa hitantsika ny emulator Nintendo 64 manan-danja indrindra izay ananantsika ankehitriny. Izy io dia ampiasaina ho fototry ny ankamaroan'ny emulator hafa izay hita ao amin'ny Play Store. Ka io no lakilen'ity karazana vokatra ity. Safidy somary fototra kokoa io raha oharina amin'ireo maodely hafa, saingy io no iray amin'ireo manome ny olana kely indrindra amin'ny resaka fifanarahana sy fitoniana. Izany dia mahatonga ny maro hahita azy io ho safidy tsara indrindra eny an-tsena ankehitriny. Misy kinova maromaro azo alaina, sady maimaim-poana no misy karama.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity emulator ity ho an'ny Android. Na izany aza, azontsika atao ny manolotra fanomezana ho an'ny mpamorona azy. Safidy loharano misokatra io, ahafahan'ny maro manisy fanovana araka izay itiavany azy.
Mupen64Plus AE (MAIMAIMPOANA)
Developer: Zanak'ondry Paul
Araka ny efa nolazainay, ny emulator teo aloha dia fototry ny maro hafa. Ary efa hitantsika fa safidy safidy firy no nipoitra rehefa mandeha ny fotoana, miaraka amin'ny fiasa bebe kokoa. Iray amin'izany. Izy io dia iray amin'ireo emulator feno indrindra, izay manome safidy bebe kokoa ho an'ireo mpampiasa. Na dia zava-dehibe ihany koa ny milaza fa io dia iray amin'ireo sarotra ampiasaina indrindra. Na dia manome antsika fahafaha-manao betsaka aza izy io, dia mety toa be loatra izy ireo ary tsy ny mora indrindra no mampiasa azy. Soa ihany, ao amin'ny Play Store tenany, ny mpamorona dia manome torolàlana ho an'ireo mpampiasa te hampiasa azy. Noho izany dia fanampiana lehibe ilaina amin'io lafiny io.
Maimaimpoana ny fampidinana ity emulator Nintendo 64 ho an'ny Android ity. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza isika. Tsy fividianana an-tery izy ireo, na dia manome safidy fanampiny aza ho an'ireo mpampiasa mila azy ireo.
Eo amin'ny toerana fahefatra dia mahita ny iray amin'ireo safidy mety henoinao indrindra ianao. Izy io dia emulator izay efa elaela no hita tao amin'ny Play Store. Inona koa, miavaka amin'ny maha iray amin'ireo safidy manohana rafitra maro kokoa. Satria manana fanohanana ny NES, Game Boy, PlayStation ary Nintendo 64, ankoatry ny maro hafa. Noho izany dia miatrika ny iray amin'ireo emulateur be mpampiasa indrindra azo alaina ho an'ny Android izahay izao. Matetika safidy azo antoka izy io ary mandeha tsara, na dia tsy misy olana na lesoka amin'izany. Ka amin'ny fotoana sasany dia hahita fatiantoka madinidinika ao ianao. Saingy, tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny traikefan'ny mpampiasa izy ireo.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity emulator ity ho an'ny Android. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza isika. Tsy fividianana an-tery izy ireo, koa raha tsy mieritreritra ianao fa hanampy anao izy ireo na hanome anao tombony hampiasa azy io amin'ny fomba tsara kokoa, dia tsy zavatra tsy maintsy aloanao izany.
Mifarana amin'ny iray amin'ireo emulator Nintendo 64 tsara indrindra ho an'ny Android amin'izao fotoana izao. Misongadina amin'ny fisian'ny fandidiana tsara sy ny fanohanana rafitra maro samihafa. Ka io dia safidy marobe indrindra amin'io lafiny io. Ny teboka ratsy amin'izany dia ny fampiasana azy tsy ny tsotra indrindra, ka mety maharitra fotoana fohy vao hitanao ny hevitra. Saingy, rehefa nianatra ianao, dia ho afaka mankafy ny asany tsara. Ho fanampin'izay, miavaka amin'ny safidy malalaka sy malalaka izy io. Zavatra tsy azon'ny emulator rehetra atao rehareha ankehitriny.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity emulator ity ho an'ny Android. Ho fanampin'izay, tsy manana karazana fividianana karazana ao anatiny izahay. Ary tsy misy karazana dokam-barotra ao anatiny. Faningana lehibe amin'ity lafiny ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Emulators » Ireo emulator Nintendo 64 tsara indrindra ho an'ny Android
r3tr0k3r dia hoy izy:
Lahatsoratra Generic ary voasoratra ratsy amin'ny misy azy ireo, mbola famerenana lahatsoratra mitovy amin'izany navoaka isan-taona manodidina io fotoana io. Mazava ho azy fa tsy misy resaka momba ny safidy atolotra azy na ny haavon'ny mifanentana isaky ny emulator, fa satria misy resaka RetroArch ho emulator dia mazava fa tsy manana hevitra kely akory ny mpanoratra miresaka izy.
Valio i r3tr0k3r
Ny Asus Zenfone 5Z dia mahazo fanatsarana isan-karazany sy fampiasa fakan-tsary amin'ny fanavaozana vaovao
Ny Huawei Mate 10 dia nivarotra singa maherin'ny 10 tapitrisa